Anna, Author at Cele Gabar
December 31, 2020	Cele News
ပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူငယ်အဆိုတော်တွေထဲမှာ G Fatt တစ်ယောက်လည်း အပါအဝင်ပါ။ G Fatt ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးတဲ့သီချင်းတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ G Fatt ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ မွေးနေ့အတွက် မပျက်မကွက်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ G Fatt က ပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်မှုများခဲ့တဲ့ “ငှက်” သီချင်းကို ပြန်လည်ပြီးတော့ Music Video ရိုက်ကူးထားခဲ့တာပါ။ ဒီသီချင်းထဲက မိန်းကလေးကတော့ တစ်ချိန်က G Fatt ရဲ့ချစ်သူဟောင်းနဲ့နာမည်ရောရုပ်ပါဆင်တူနေတာကြောင့် ချစ်သူဟောင်းကိုသတိရနေတာလားဆိုပြီး ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာပါ။ အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာဝေးကွာသွားခဲ့တဲ့အချစ်ရေးလေးကတော့ G Fatt ရဲ့လက်တွေ့ဘဝထဲကအဖြစ်အပျက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေတာလားဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ မွေးနေ့မှစပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေနဲ့အတူ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိစေဖို့ …
မွေးနေ့လေးမှာ သေချာပြင်ဆင်ပြီး Surprise တိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေကြောင့် ပျော်ရွှင်နေတဲ့သဇင်ထူးမြင့်
တက်သစ်စမင်းသမီးချောလေးတွေထဲပရိသတ်ချစ်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာ သဇင်ထူးမြင့်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အနုပညာမျိုးဆက်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ကိုယ်ပိုင်အနုပညာအရည်အချင်းကောင်းတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပါ။ ဒါ့အပြင် ပုရိသတွေဝန်းရံခြင်းခံရတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ ပရိသတ်တွေသဲလို့သိကြတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပါ။ မွေးနေ့လေးမှာတော့ Double dating အဖွဲ့သားတွေက Surprise ပြုလုပ်ပေးပြီးအမှတ်တရဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ “Double dating team လေးကချစ်ဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲ… ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် …အလေးထားပြီး သေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးsurprise ပေးကြတဲ့တွက်” ဆိုပြီးတော့ ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ သဲရဲ့မွေးနေ့မှာတော့ မင်းသမီးချောလေးယွန်းယွန်းကလည်း “Happy Birthday သူငယ်ချင်း 2018မှာ စရင်းနှီးခဲ့ပေမယ့်။ 2020ကျမှ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေ ဖြစ်လာတယ်..အသက်ရော ရာသီခွင်ရော အကြိုက်ရော အကုန်တူတဲ့ သူငယ်ချင်းထက်ပိုပြီး ညီအစ်မလိုချစ်ရတဲ့ ၁၉ရက်ကြီးတဲ့ bestieလေး..မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ အဝေးက ဆုတောင်းမနေတော့ဘဲ …
Miss Universe Myanmar 2020 အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတဲ့ညီမဖြစ်သူအတွက်ဂုဏ်ယူနေတဲ့မေ
မေကတော့ သရုပ်ဆောင်မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို သီချင်းအေးအေးလေးတွေနဲ့ပရိသတ်ကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ မေရဲ့ညီမအရင်းဖြစ်တဲ့သူဇာဝင့်လွင်ကတော့ မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ (၈)ကြိမ်မြောက် မယ်စကြာဝဠာမြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးမှာ Winner ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဇာဝင့်လွင်ကတော့ အသားညိုညို မြင့်မားတဲ့အရပ်နဲ့အတူ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာ အချိုးအစားကျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်နေစဉ်အချိန်အတွင်းမှာလည်း Miss Universe Myanmar 2020 ဖြစ်ဖို့အတွက် ရေပန်းစားနေခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ Final ပွဲကြီးကျင်းပတဲ့အခါမှာလည်း အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး Winner အဖြစ်နဲ့ သရဖူကိုရရှိပြီး Miss Universe Myanmar 2020 အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ မေကတော့ ညီမဖြစ်သူရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် အကြီးအကျယ်ဂုဏ်ယူပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ” မေ့ ညီမလေး Miss Universe Myanmar 2020 ရသွားပါတယ်။Congratulations ငါ့ညီမလေးရေ” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ Source : …
မွေးနေ့မှာပရိသတ်တွေကို MV လက်ဆောင်ပေးမယ့် “ငှက်”သီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခံစားချက်ကိုဖွင့်ဟလာတဲ့ G Fatt
December 30, 2020	Cele News
G Fatt ကတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့သီချင်းတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပါ။ မနက်ဖြန်ဒီဇင်ဘာလ(၃၁)ရက်နေ့ကတော့ သူ့ရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအားပေးမှုများခဲ့တဲ့ “ငှက်”သီချင်းလေးရဲ့ MV ကို ထွက်ရှိသွားမှာပါ။ ဒီသီချင်းလေးကို အမှတ်မထင်ဖန်တီးခဲ့ဲတဲ့အကြောင်းကို “လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်ကျော် ၅နှစ်လောက်က ငှက်သီချင်းကိုရေးခဲ့တယ် မှတ်မှတ်ရရ အမြန်လမ်းမပေါ် မှာခရီးသွားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ တိမ်တွေရဲ့အရိပ်က ထိုးကျနေတာကို အဝေးကလှမ်းကြည့်ရတာ အရမ်းလှတာပဲ ဒါပေမယ့်တောင်တန်းတွေအနီးနားကိုကားကတစ်ဖြည်းဖြည်းနီးလာလေလေ အဲ့ဒီ့တိမ်အရိပ်လေးတွေက သိပ်မလှတော့သလိုခံစားရလေပဲ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ် တစ်ချို့အချစ်တွေဟာ အဲ့တိမ်အရိပ်နဲ့တူတယ် နီးနေတဲ့အချိန်မှာ အချစ်ရဲ့လှပမှုကိုမခံစားရဘူး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုဝေးသွားလေ အချစ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုပိုမြင်လာလေပေါ့” ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေလာတာပါ။ ဒီသီချင်းထဲက ‘တောင်တန်းတွေပေါ်မှာရှိတဲ့ တိမ်တိုက်ရဲ့အရိပ်လိုမျိုး ငါ့အချစ်က နင်အဝေးကကြည့်မှတွေ့နိုင်လို့ ‘ ဆိုတဲ့ Melody နဲ့ …
အတိုက်အခိုက်တွေကြားက အကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်ခဲ့လို့ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေတဲ့ နေခြည်ဦး
နေခြည်ဦးကတော့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ကနေပြီး သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ်ကို အချိန်တိုအတွင်းအောင်မြင်မှုရရှိလာသူပါ။ အခုလည်း နာမည်ကျော်အမှတ်တံဆိပ်တော်တော်များများနဲ့ လက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ နေခြည်ကတော့ She Shines Jewelry အတွက် live sale ကို(၃)ရက်တိုင်တိုင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Live Sale ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့(၃)ရက်လုံး သိန်းပေါင်းများစွာရောင်းချခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး အားပေးဝယ်ယူသူလည်း များပြားခဲ့ပါတယ်။ နေခြည်ကတော့ အခုလိုအောင်အောင်မြင်မြင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် “တကယ် နေခြည် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အတိုက်အခိုက်တွေကြားက နေခြည်အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပြီး ပန်းတိုင်ကို ဝင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဖိအားတွေတွန်းအားတွေပေးတဲ့သူတွေကြောင့် ပိုပြီးကြိုးစားဖြစ်တယ် အားပေးတဲ့သူ ချစ်တဲ့သူတွေကြောင့် နေခြည်ပိုပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိလာပါတယ်။ နေခြည်ဦး fan တွေက ကလေးတွေ ဘယ်သူကဝယ်မှာလဲ ဆိုသူတွေအတွက် We Are RED HOT CHILLIES .. My …
ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရပြီး ငွေကြေးအခက်အခဲများစွာဖြစ်နေတဲ့ညီမငယ်တစ်ဦးကို လှူဒါန်းခဲ့ပြန်တဲ့ မျိုးမင်းစိုး
ဒီဇိုင်နာမျိုးမင်းစိုးကတော့ အလှူအတန်းရက်ရောလွန်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေလည်း သိကြမှာပါ။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်တဲ့ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးအနေနဲ့လည်း ရပ်တည်နေပါသေးတယ်။ မကြာခဏဆိုသလိုအလှူလုပ်လေ့ရှိတဲ့မျိုးမင်းစိုးကတော့ ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့ကင်ဆာရေဂါသည်တစ်ယောက်ကို “ဒီနေ့ပီတိဖြစ်ခဲ့တဲ့အလှူလေးတစ်ခု ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာခံစားရပြီးဆေးသွင်းကုသဖို့ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ညီမငယ်လေးတစ်ဦးအတွက် ကျနော်တတ်နိူင်တဲ့ငွေလေးနဲ့ လှုဒါန်းဖြစ်ခဲ့တာလေးပါ။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများလည်းတတ်အားသရွှေ့လှုနိုင်ပါကြောင်း နိုးဆော်ပေးရပါတယ်။ အကျိုးဆောင်ပေးတဲ့ချစ်ညီမလေး Dr WaiMon Thant ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်…. အမြဲလှူဒါန်းနိင်တဲ့လက်တစ်စုံဖြစ်ပါရစေ…” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားဖော်ပြလာတာပါ။ မျိုးမင်းစိုးကတော့ အမြဲလိုလိုအလှူအတန်းပြုလေ့ရှိပြီး မကြာသေးခင်ကလည်း လမ်းလာခင်းတဲ့စည်ပင်လုပ်သားတွေကို အိမ်မှာရှိတဲ့ဆန်တွေနဲ့အလှူအတန်းပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုလည်း ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါသည်အတွက် ငွေကျပ်နှစ်သိန်းလှူဒါန်းခဲ့ပြန်ပါပြီနော်… Source : MyoMinSoe
အေးမြဖြူကိုတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲက Top3တစ်ယောက်အဖြစ်သိကြသလို ငယ်စဉ်ကတည်းက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ပရိသတ်တွေရင်းနှီးကြမှာပါ။ အခုလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုလည်း အခိုင်အမာရရှိထားသူပါ။ အေးမြဖြူကတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအဆွေးသီချင်းလေးနာမည်ကတော့ “လွမ်းနေလို့” ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်အာပေးမှုများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း သီချင်းအသစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာတာပါ။ အေးမြဖြူကတော့ သူလေးစားအားကျရတဲ့အိုင်ဒေါတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားချောနေတိုးနဲ့အတူ Music series (၃) ပုဒ်ကို ရိုက်ကူးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်ကနေတစ်ဆင့်ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Source : AyeMyaPhyu
ဘဝမှာဘယ်သူမှမရှိလည်း ဂီတနဲ့ပျော်မွေ့နေသူတစ်ယောက်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာတဲ့ ပိုပို
December 29, 2020	Cele News
အဆိုတော်ပိုပိုကတော့ သူချစ်တဲ့ဂီတတွေကိုဖန်တီးရင်းပျော်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်ဂီတွေကိုတွေဖန်တီးရေးသားသီဆိုကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေကို ရရှိထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝကို အောက်ခြေကနေပြီတစ်ယောက်တည်းရုန်းကန်ကာ အခုဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးအဖြစ်ရပ်တည်လာနိုင်တဲ့ပိုပိုကတော့ လေးစားအားကျစရာကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုကတော့ သူ့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေ အတွေးအခေါ်တွေကို ပရိသတ်တွေကို ဖေ့ဘွတ်ခ်ကနေတဆင့်မျှဝေလေ့ရှိသူပါ။ အခုလည်း သူ့ဘဝမှာဂီတကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြလာပြန်ပါတယ်။ ပိုပိုကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “ဘဝ ဆိုတာ ပျော်အောင်နေတတ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး မင်းဘေးမှာ ဘယ်သူမှ မရှိနိုင်ဘူး။ မရှိလဲ အေးဆေး Music ရှိတယ်” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားဖော်ပြလာတာပါ။ ပိုပိုကတော့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ပြီး တစ်ယောက်တည်းပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုကတော့ အမြဲလိုလိုသီချင်းအသစ်တွေဖန်တီးနေသူဖြစ်ပြီး ဘယ်သူမှမရှိလည်း ဂီတနဲ့ပျော်မွေ့နေသူတစ်ယောက်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာခဲ့ပါပြီ။ Source : ဝတ်ရည်မိုး
TC Candlerရဲ့ ကမ္ဘာ့အချောမောဆုံးသောအမျိုးသားယောက်(၁၀၀)စာရင်းမှာ နံပါတ်(၁၀)ချိတ်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်
ပိုင်တံခွန်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲနာမည်ကျော်မော်ဒယ်လ်၊သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သလို ပြည်ပမှာလည်း ပရိသတ်တွေရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကကျေနပ်အားရသလို အခုလည်း ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုရှိလာပြန်ပါပြီ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကနာမည်ကျော်တွေကို စာရင်းကိုထုတ်ပြန်လေ့ရှိတဲ့ TC Candler ကတော့ဒီတစ်နှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက မင်းသားချောပိုင်တံခွန် ၊ဝတ်မှုန်ရွှေရည်၊ခင်ဝင့်ဝါ၊နော်ဖော်အယ်ထား နဲ့ မေမြင့်မိုရ် အစရှိတဲ့အနုပညာရှင်တွေကို ဆန်ခါတင်စာရင်းထဲထည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ The 100 Most Handsome Faces of 2020 စာရင်းမှာတော့ ပိုင်တံခွန်ဟာ နံပါတ်(၁၀)အဆင့်အထိဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ယောကျာ်းပီသပြီးခန့်ညားချောမောတဲ့ပိုင်တံခွန်ကတော့ အခြားသောနာမည်ကျော်တွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးအဆင့်(၁၀)နေရာမှာ ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ အခုလိုအဆင့်ကိုရရှိတာပထမဆုံးဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကတော့အရမ်းကိုဂုဏ်ယူနေတော့မှာပါ။နောက်ထပ်လည်း မြန်မာနိုင်ငံကအခြားသောအနုပညာရှင်တွေအခုလိုစာရင်းမှာ ပါဝင်လာဖို့လည်း ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်နေမှာ အမှန်ပါပဲနော်.. Source : TCCandler,PaingTakhon
“ရေစက်”သီချင်းထဲက ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်မှာကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကို မျှဝေလာတဲ့နေတိုး
ကော်နီကတော့ အသစ်ထွက်သမျှသီချင်းတိုင်းကလူကြိုက်များကာရေပန်းစားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလည်း “ရေစက်” ဆိုတဲ့သီချင်းအသစ်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုက်ညီနေပြန်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းရဲ့ MV ထဲမှာတော့ ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နေတိုးနဲ့ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ သီချင်းထဲမှာပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ပုံရိပ်တွေကို နေတိုးကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်အကောင့်မှာပြန်လည် ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းကတော့ ကြေကွဲစရာသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သလို ရွှေကစ်နဲ့နေတိုးရဲ့အမိုက်စားသရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် သီချင်းကပိုပြီးရုပ်လုံးကြွလာခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ရေစက် သီချင်းကတော့ မနေ့ကထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားလျက်ရှိနေတာပါ။ (၂၀၂၀) နှစ်ကုန်မှာ ပရိသတ်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ကော်နီရဲ့သီချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အဆွေးသီချင်းကြိုက်သူတွေအတွက် ကော်နီရဲ့ရေစက် သီချင်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ Source : Connie,NayToe